IsAmbulo Esiya KuJohane 13:1-18
Isilo sasendle esinamakhanda ayisikhombisa esiphuma olwandle (1-10)
Isilo esinezimpondo ezimbili esiphuma emhlabeni (11-13)
Isithombe sesilo esinamakhanda ayisikhombisa (14, 15)
Uphawu nenombolo yesilo sasendle (16-18)
13 Wama* esihlabathini solwandle. Ngabona isilo sasendle + sinyuka siphuma olwandle, + sinezimpondo eziyishumi namakhanda ayisikhombisa, ezimpondweni zaso kunemiqhele* eyishumi, kodwa emakhanda aso kunamagama enhlamba. 2 Isilo sasendle engasibona sasinjengengwe, kodwa izinyawo zaso zinjengezebhere, nomlomo waso unjengomlomo webhubesi. Udrako + wanika isilo amandla aso nesihlalo saso sobukhosi negunya elikhulu. + 3 Ngabona ukuthi elinye lamakhanda aso kwakungathi linenxeba elibulalayo, kodwa inxeba laso elibulalayo lase lipholile, + wonke umhlaba walandela isilo sasendle uncoma. 4 Abantu bakhulekela udrako ngoba wanika isilo sasendle igunya, futhi bakhulekela isilo sasendle ngala mazwi: “Ubani onjengesilo sasendle, ubani ongalwa naso?” 5 Sanikwa umlomo okhuluma izinto ezinkulu nenhlamba, sanikwa negunya lokuphatha izinyanga ezingu-42. + 6 Sahlambalaza + uNkulunkulu, sahlambalaza igama lakhe nendawo ahlala kuyo, ngisho nalabo abahlala ezulwini. + 7 Savunyelwa ukuba silwe nabangcwele sibanqobe, + sanikwa igunya phezu kwazo zonke izinhlanga nabantu nezilimi nezizwe. 8 Bonke abahlala emhlabeni bayosikhulekela. Akekho noyedwa kubo okwake kwalotshwa igama lakhe emqulwini wokuphila + weWundlu elabulawa, + kusukela ekusungulweni kwezwe. 9 Uma umuntu enendlebe, makezwe. + 10 Uma umuntu ehloselwe ukuthunjwa, uzothunjwa. Uma umuntu eyobulala ngenkemba,* kumelwe abulawe ngenkemba. + Yingakho abangcwele + bedinga ukukhuthazela + nokholo. + 11 Ngabona esinye isilo sasendle siphuma emhlabeni, sinezimpondo ezimbili njengewundlu, kodwa saqala ukukhuluma njengodrako. + 12 Sisebenzisa lonke igunya lesilo sasendle sokuqala + esiphambi kwaso. Senza ukuba umhlaba nalabo abahlala kuwo bakhulekele isilo sasendle sokuqala, esinxeba laso elibulalayo lalelashiwe. + 13 Senza izibonakaliso ezinkulu phambi kwabantu, size sehlisele nomlilo emhlabeni uvela ezulwini. 14 Sidukisa abahlala emhlabeni, ngenxa yezibonakaliso esavunyelwa ukuba sizenze phambi kwesilo sasendle, kuyilapho sitshela abahlala emhlabeni ukuba basenzele isithombe + isilo sasendle esasithole inxeba lenkemba nokho salulama. + 15 Savunyelwa ukuba sinike isithombe sesilo sasendle umoya,* ukuze lesi sithombe sesilo sasendle sikhulume futhi sibangele ukuba kubulawe bonke abangasoze basikhulekele isithombe sesilo sasendle. 16 Siphoqa bonke abantu—abantukazana nezikhulu, abacebile nabampofu, abakhululekile nezigqila—ukuba babekwe uphawu esandleni sabo sokudla noma esiphongweni* sabo, + 17 nokuba kungabikho muntu ozokwazi ukuthenga noma ukuthengisa ngaphandle komuntu onophawu, igama + lesilo sasendle noma inombolo yegama laso. + 18 Lapha yilapho kudingeka khona ukuhlakanipha: Ohlakaniphile makabale inombolo yesilo sasendle, ngoba iyinombolo yomuntu, inombolo yaso ngu-666. +
^ Okuwukuthi, udrako.
^ Noma, “kunemiqhele yasebukhosini.”
^ Noma kungaba, “Uma umuntu ezobulawa ngenkemba.”
^ Noma, “siphefumulele isithombe sesilo sasendle.”